Showing ३१-४० of १७१ items.
प्रकाशित मितिः मंसिर १४, २०७७
धरान/ क्लासिक ग्यालरी ललितपुरको आयोजनामा धरानका कलाकार तीर्थ निरौलाको भर्चुअल कला प्रदर्शनी भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा अनलाइन कला प्रदर्शनी नौलो हो । प्रदर्शनीलाई ग्यालरीको आधिकारिक युट्युव च्यानल, इन्स्टाग्राम, फेसबुक तथा अन्य साइटमा देख्न सकिनेछ । प्रदर्शनीमा तीर्थ निरौलाको २२ चित्रकृतिहरू राखिएका छन् । कलाकृतिहरू एक्रेलिक, कलम र मसी, मिश्रण विधिलगायतका माध्यमहरूबाट बनाइएका छन् भने विषयवस्तुमा विविध विषयहरूलाई समेटिएको छ । प्रायः गणेश, नारी, प्रकृति, शान्ति र जीवनजगत्हरू चित्रमा देख्न सकिन्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा चित्रहरू ग्यालरीमा प्रदर्शन गर्न नमिल्ने भएकोले प्रदर्शनीको यो अनलाइ
प्रकाशित मितिः आश्विन १८, २०७७
विराटनगर । लगातारको वर्षाका कारण विराटनगर डुबानमा परेको छ । तीन दिनदेखि परेको वर्षाका कारण विशेष गरि विराटनगरको दक्षिणी भेग डुबानमा परेको हो । सामान्य वर्षा हुँदा पनि निकास नभएका कारण विराटनगर–१५ को अधिकाशं घरमा पानी पसेको वडाअध्यक्ष असलम आलमले बताए । ‘विराटनगरको उत्तरी भेगबाट आएको पानी वडा नं. १५ मा आएर जम्मा हुन्छ । अहिले दुई वटा मात्र साइफन रहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा पानीको निकास हुने साइफन नहँुदा वडा भित्रका घरहरू डुबानमा पर्ने गरेको छ,’ वडाअध्यक्ष आलमले भने, ‘पानीको निकास हुने साइफन थप गर्न महानगरपालिका र सडक विभागलाई पनि जानकारी गराएको छु ।’ विराटनगर
प्रकाशित मितिः आश्विन ९, २०७७
केचना स्थित तुम्छाहाङ लाेटस रिसाेर्टका मनमाेहक दृश्यहरू
ब्लाष्टखबर । धरानबाट ५० किलाेमिटरकाे दुरीमा रहेकाे माेरङकाे सुनबर्सी नगरपालिका स्थित केचनामा अवस्थित साठे सात विघा क्षेत्रफलमा फैलिएकाे तुम्छाहाङ लाेटस रिसाेर्टका मनमाेहक दृश्यहरू । यहाँ काेशी पूर्वका धरान, इटहरी लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाका साथै झापा र माेरङका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्राकृतिक साैन्दर्यताकाे दृश्यावलाेक गर्न तथा पाेखरीमा बाेटिङ्ग गर्न मानिसहरू आउने गर्द छन् । पथरी हाइवेबाट करीब १० किलाेमीटर दक्षिण रहकाे याे रिसाेर्टमा रहेकाे पाेखरीमा कमलकाे फुलका साथै विभिन्न जनातका माछाहरू समेत रहेका छन् ।
प्रकाशित मितिः आश्विन ४, २०७७